क्लास्सिक टेकले लन्च गर्यो देशकै उच्च इन्टरनेट गतिको टाक्एन प्याकेज - Jagaran News Jagaran News
क्लास्सिक टेकले लन्च गर्यो देशकै उच्च इन्टरनेट गतिको टाक्एन प्याकेज
Published On : 13 January, 2022 6:04 pm
काठमाडौं, पुस २९ । देशकै अग्रणी तथा ठूलो नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक नेपालमा सन् २००९ देखी सुभाराम्भ भएको र १२ बर्षमै ७४ वटा जिल्लाका १०३ आउटलेट बाट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। देशमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने संख्या बढ्दै जादा क्लास्सिक टेक्ले कम मूल्य मा उच्च गतिको इन्टरनेट देशको सबै गाउँ र सहर मा सेवा दिदैं आएको छ ।
छन्जश राउटर र मेष वाइफाई ल्याएको क्लास्सिक टेक ले इन्टरनेट को आवस्यकता र आफ्ना प्रयोगकर्ता हरुको मार बुझेर छिठो छारितो र एक दमै न्युन मुल्यमा नया उच्च इन्टरनेट गतिको टाक्एन प्याकेज ल्याएको छ ।
फेसबुक लाइभ मार्फत नया ब्राण्ड एम्बासेडर बिपिन कार्की द्वारा उक्त प्याकेज सार्वजनिक गरिएको हो । कम्पनी को उद्देस्य “उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा न्यून मूल्यमा सबै शहर तथा गाउँ घरमा मा पहुँच” हुने रहेको छ ।
टाक्एन प्याकेज मा 150mbps,225mbps ,325mbps,625mbps र 1000mbps को बिभिन्न प्याकेज हरु समायोजन गरिएको छ। १५० देखि १०००mbps सम्म को प्याकेज क्लास्सिक को वेवसाइट https://www.classic.com.np/ मार्फत लिन सकिने छ । अहिले को बिध्यमान परिस्थिमा इन्टरनेट को महत्व झन् बढेर गएको र प्रयोगकर्ता हरुले भोग्नु पर्ने सम्भावित समस्या हरुलाई मध्यनजर राखेर टाक्एन प्याकेज ल्याएको छ ।
सोहि कुरा लाइ मध्यनजर राखेर निम्न कुरा हरु रहेको छ
१. अहिले क्लास्सिक टेक प्रयोग गरिरहेका प्रयोगकर्ता हरुको प्याकेज ६५० गुणा ले निशुल्क अपग्रेड गरिएको छ।
२. टाक्एन प्याकेज प्रयोग कर्ताले क्ष्एत्ख् सित्तैमा प्रयोग गर्न सकिने छ ।
३. टाइम ब्याक सिस्टम रहेको जसमा केहि प्राबिधिक कारणबस सेवा अबरुद्ध हुन पुगेमा कम्पनी ले त्यसको क्षतिपूर्ति बापत दिनहरु थप गर्न सक्नेछ ।
न्यून इन्टरनेट गति को समस्या ले मार मा पर्नु भएका हरुलाई मध्यनजर राखेर यो टाक्एन प्याकेज ल्याइएको हो। यस बारे क्लास्सिक टेक मा फोन ९८०१००४४७७ अथवा फेसबुक मार्फत जानकारी लिन सकिने छ भने क्लास्सिक टेक को वेब साइट https://www.classic.com.np/ वा daraz बाट https://click.daraz.com.np/e/_7kixS मा गएर थप जानकारी लिन सकिने छ ।
काठमाडौं, पुस २२ । पछिल्लो समय धेरै भन्दा धेरै चलाउनेमा पर्ने गर्छ । टिकटक याप
नेपाल टेलिकमको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा मह जोडी
काठमाडौं, पुस २ । महजोडीको रुपमा चिनिने कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई नेपाल टेलिकमले
काठमाडौं, पुस २९ । देशकै अग्रणी तथा ठूलो नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेक नेपालमा
काठमाडौं,पुस २९ । छिमेकी देश भारतमा दैनिक जसो ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमणमा बृद्धि भएको छ